4 Klaasị Nzere Nna -ukwu kacha mma n'ịntanetị nwere Asambodo 2021
Usoro 4 Degree kacha mma na ntanetị na asambodo
Na-achọ ka esi enweta akara ugo mmụta maka n'efu? Nke a bụ onye ndu na-ekpughe ihe mmụta kachasị mma n'ịntanetị na asambodo nke asambodo ndị a ma ama na mahadum mba ụwa nwere ike itinye maka.
N'ịchọ maka ọganihu ọrụ, ogo mmụta bụ ihe mbụ na-abata n'uche ma ọ bụ n'ihi na ọ gosipụtara na ọ bụ ngwaọrụ ma ọ bụ ogo dị ike nke na-ewe ihe ọmụma gị, nka, na n'ozuzu, ọrụ na ọkwa ọzọ. Karịsịa ugbu a na a na-ewerezi akara mmụta dị ala dị ka 'nzere nkịtị'.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ndị mmadụ na-agbaso akwụkwọ asambodo nke nna ukwu, ọ nwere ike ịbụ ihe onwe onye, ​​iji nweta nkwalite n'ebe ọrụ, ịmalite azụmaahịa ọhụrụ ma ọ bụ ụzọ ọrụ, bụrụ ndị ọkachamara, gbagoro n'ọkwa agụmakwụkwọ, wdg.
1 Banyere Nzere masta na ntanetị na asambodo
1.1 Uru nke usoro nchịkwa nke ndị isi na ntanetị na asambodo
1.2 Nbanye chọrọ maka Degree Master's Degree
1.3 Kedu ihe dị iche na ntanetị na akwụkwọ nchịkwa nke ọdịnala ọdịnala?
1.4 Enwere ogo ọ bụla n'ịntanetị n'efu?
1.5 Ebee ka m nwere ike nweta ogo nke nna m ukwu n'efu?
1.5.1 Ebe ị nwere ike inweta Degree Degree Free
2 Usoro nkuzi nke ndị nna ukwu na ntanetị n'efu na asambodo
2.1 Mmemme MIT Media Lab na Media Arts & Sciences
2.2 Curtis Institute of Music, Nna-ukwu nke Egwu
2.3 Mahadum nke ndị mmadụ MBA Mmemme na Njikwa
2.4 Mahadum nke ndị mmadụ Master of Education
Ihe mere ị ga-eji nweta akara ugo anaghị agwụ agwụ mana ọ dịkwa mkpa ebe ọ bụ na ị kpebiri ịga n'ihu na agụmakwụkwọ gị na ịnara akara mmụta ọ bụla n'ịntanetị nke m ga-edepụta n'oge na-adịghị anya ga-enyere aka n'ịkwalite ọrụ gị na ihe ọzọ, ị nweta asambodo mgbe emechara.
Ee, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịkwalite ọrụ gị mana ọ nwere ike bụrụ nrụgide na oke ọnụ yana onye ọ bụla n'ime ụwa nke oge a ekwesighi ka nrụgide ma ọ bụ mefuo nnukwu ihe, ọ bụghị site na ọhụụ ọhụụ na ọgbara ọhụrụ nke emepụtara iji mee ka ndụ dịkwuo mfe ma dịkwa ọnụ ala .
Na ime ka ndụ dịkwuo mfe ma dịkwa ọnụ ala, ihe ọhụụ ndị a na ọgbara ọhụrụ enyerela aka na ngalaba agụmakwụkwọ ma ugbu a ị nwere ike nweta akara ugo mmụta ọ bụla n'ịntanetị, etinyere akara ugo mmụta, na gburugburu nsogbu na-adịchaghị njọ ma ọ dị ọnụ ala.
Banyere Nzere masta na ntanetị na asambodo
Ọmụmụ ihe n'ịntanetị bụ otu n'ime mgbanwe kachasị mma na ngalaba kachasị mma nke ngalaba agụmakwụkwọ na-enweta ogologo oge, ana m amaja na ngalaba ahụ arụla ezigbo ọrụ nke itinye teknụzụ dijitalụ ọgbara ọhụrụ ka ọ baara ya uru ma nsonaazụ ya bara nnukwu uru.
Kama ị na-agagharị na ịga ụlọ akwụkwọ ma na-eche nrụgide na nhụjuanya ahụ, ị ​​ka nwere ike ịmụ ihe ọ bụla ịchọrọ, nweta akara nke masịrị gị, gụnyere agụmakwụkwọ nna ukwu n'ịntanetị n'efu na asambodo na nkasi obi nke ụlọ gị na nanị kọmpụta / desktọọpụ kọmputa ma ọ bụ ama na njikọ internetntanetị.
Ihe okike nke ntanetị mmụta ntanetị Ọ bụ naanị otu n'ime onyinye dị ukwuu nke teknụzụ ọgbara ọhụrụ nyere na ohere agụmakwụkwọ na ihe ọhụụ dịka nke a ka mmadụ niile wee nwee ọ enjoyedụ, nke mere ụfọdụ azụmaahịa ọgbara ọhụrụ, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ahọrọ iji ndị mmadụ nwere ikike ha, ihe ọmụma na ogo ha. site n'ịmụta ihe n'ịntanetị.
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ndị ọrụ nke otu ndị a kwenyere ma ọ bụrụ na ị nwere ike iji ụdị ọhụụ a wee mụta ihe mgbe ahụ ị ga-enwe ike ịghọta etu teknụzụ ọgbara ọhụrụ na ihe ọhụụ ga - esi nyere aka na ịga nke ọma nzukọ, azụmaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
N'ihe banyere ọmụmụ ihe n'ịntanetị, nke na-eji ịntanetị iji kụziere ma kwadebe ụmụ akwụkwọ nwere nkà na ihe ọmụma dị mkpa n'agbanyeghị ebe ị nọ n'ụwa. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnọ na Malaysia na nweta ntanetị nzere nzere masta na Mahadum Stanford ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịnweta akwụkwọ azụmahịa ị nwere ike nweta otu site na Lọ akwụkwọ azụmahịa Harvard n'ịntanetị nke ọma na nkasi obi nke ụlọ gị ma ọ bụ ebe ọ bụla dị gị mma ịmụ.
N'ezie, ụlọ ọrụ klaasị nke ụwa anabatala ihe mmụta mmụta n'ịntanetị na afọ ole na ole ewepụtala ndị gụsịrị akwụkwọ na-agụsị akwụkwọ ebe ụfọdụ abanyela na ndị ọrụ ọrụ nwere ọnọdụ ka mma na ndị ọzọ nwere ike ịmalite azụmaahịa ọhụụ nke gara nke ọma.
Ọ nwere ike iju gị anya ịmata nke a mana ị nwere ike ịnara nkuzi n'ịntanetị n'efu nke ụlọ ọrụ Ivy League nyere, ee otu ụlọ akwụkwọ Ivy League nke ị maara nke ewu ewu, n'etiti ụlọ akwụkwọ kachasị mma n'ụwa, dị oke ọnụ ma nwee oke asọmpi ịbanye, onye ọ bụla si n'akụkụ ọ bụla nke ụwa nwere ike were usoro ịntanetị ha na-enye na-enweghị akwụ ụgwọ.
Ọmụmụ ihe n'ịntanetị n'ozuzu ya nwere uru mana mana banyere uru nke ịnweta asambodo nzere masta na ntanetị, m ga-atụlekwa ha.
Uru nke usoro nchịkwa nke ndị isi na ntanetị na asambodo
N'adịghị ka nwa akwụkwọ ụlọ akwụkwọ oge niile ga-aga ụlọ akwụkwọ kwa ụbọchị, maka ogo mmụta n'ịntanetị, ị nwere ike ịmụ otu ụzọ ahụ wee nweta otu nka, usoro na ihe ọmụma site na nkasi obi nke ụlọ gị ma ọ bụ ebe ọ bụla yiri ka ọ dị gị mma ịmụ.
Ọkwa akara ntanetị dị ọnụ ala ma dịkwa ọnụ ala ma e jiri ya tụnyere mmemme nna-ukwu na-anọghị n'ịntanetị.
Mmemme ogo mmụta n'ịntanetị na-agbanwe agbanwe nke pụtara na ị ga-eji tebụl oge gị na-amụ ihe.
Mgbanwe nke ogo mmụta dị n'ịntanetị na-enye ya ohere ka ọ ghara imetụta ihe ị na-eme kwa ụbọchị, ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ mgbe ha na-amụ maka ogo mmụta nna ha ukwu n'ịntanetị.
Mgbe emechara ya, uru ya na onye isi ulo akwukwo nke ulo akwukwo.
Ọ bụ ngwa ngwa iji wuchaa.
N'elu bụ ụfọdụ uru ndị dị mkpa metụtara inweta ogo mmụta nnabata n'ịntanetị.
Nbanye chọrọ maka Degree Master's Degree
Enwere ụfọdụ ihe achọrọ iji bido mmemme mmụta nna gị ukwu n'ịntanetị yana ihe ndị a dị mkpa, mana ka kpọtụrụ ụlọ ọrụ ndị ọbịa ka ịmatakwu, ọ bụrụ na.
Iji tinye akwụkwọ maka usoro nrịgo mmụta ọ bụla dị n'ịntanetị, ndị na-enyocha akwụkwọ ga-agwụcharịrị mmemme gụsịrị akwụkwọ.
your nzere bachelọ akwụkwọ ga-abụ akụkụ nke usoro ntinye akwụkwọ a ga-achọ ka ị nyefee ya n'oge ngwa.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ụlọ ọrụ dị n'ịntanetị nwere ike ịchọ maka GPA a kapịrị ọnụ na mpaghara ọmụmụ ihe, ụfọdụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịntanetị anaghị achọ ya yabụ na ị ga-enyocha ụlọ ọrụ nnabata gị na ntanetị iji jụọ nke a.
Fọdụ ụlọ akwụkwọ dị n'ịntanetị nwere ike ma ọ bụ ghara ịrịọ maka akara GRE ma ọ bụ GMAT maka ngwa nna gị ukwu n'ịntanetị, ị kwesịrị ịlele ụlọ ọrụ gị na ụlọ ọrụ iji jide n'aka n'ezie
Dejupụta akwụkwọ anamachọihe mmụta ịntanetị na ntanetị nke ọma, gosi ntinye gị tupu ị nyefee ya.
Kedu ihe dị iche na ntanetị na akwụkwọ nchịkwa nke ọdịnala ọdịnala?
Akwụkwọ akara ugo mmụta nna ukwu n'ịntanetị na akwụkwọ nzere masta ndị isi ọdịnala bụ otu ihe ma ọ bụrụ na enwetara ya na mahadum mba ofesi a ma ama. Ha abụọ nwere ike ịkpọrọ gị gaa otu ebe ma nwee ike ịnabata ya n’ụwa niile.
Ajụjụ a ma ọ bụ karịa ọgba aghara emeela ka ọtụtụ ndị chọrọ ị nweta asambodo ha n'ịntanetị ka ha zere ya maka mmụta ọdịnala n'ihi na ha chere na asambodo dị n'ịntanetị abụghị nke ezigbo dịka nke enwetara site na ụlọ akwụkwọ oge niile.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdịiche dị n'etiti akara ntanetị na ọdịnala ọdịnala, naanị na enwetara nke ahụ na nke ọzọ abụghị. Otu ihe ị nwere ike ịlele bụ ma ọ bụrụ na amatakwara ma nabata akara ntanetị na obodo gị.
Yabụ, na ọgba aghara a kpochapụrụ na ọ bụ oge m ga-agaghachi na isi ihe kpatara edemede a. Edere m n'okpuru ebe a ọtụtụ usoro mmụta nke nna ukwu ndị nyere webụsaịtị na ntanetị n'efu site na mahadum ndị mba ụwa kwadoro.
Enwere ogo ọ bụla n'ịntanetị n'efu?
Ee, enwere ọtụtụ ntanetị n'ịntanetị n'efu maka ọmụmụ ihe omumu, nna ukwu na ọbụna Ph.D. mmemme. Dịka eziokwu, Mmemme ntanetị n'ịntanetị na Media Arts & Sciences site na MIT kpuchitere ma nna ukwu na Ph.D. mmemme niile n'efu!
Ka o sina dị, elekwasị m anya na isiokwu a bụ isi na ogo nke nnwere onwe nnwere onwe maka ụmụ akwụkwọ si n'akụkụ ụwa niile na nkọwa ngwa ha.
Ebee ka m nwere ike nweta ogo nke nna m ukwu n'efu?
Mahadum nke ndị mmadụ bụ otu n'ime ebe ị ga - enweta akara ugo mmụta nkuzi na - akwụghị ụgwọ. Mahadum ahụ bụ nke mbụ na mahadum ndị America kwadoro na mahadum na-akwụghị ụgwọ agụmakwụkwọ. UoP na-eme ihe omume ya niile, onyinye, na asambodo ya niile na ntanetị.
Gbaso ndepụta anyị nke mmemme nnabata n'efu na ebe a, n'okpuru bụ ebe ị nwere ike nweta akara ugo mmụta n'efu;
Ebe ị nwere ike inweta Degree Degree Free
Mahadum nke ndị mmadụ
Ụlọ Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Urtlọ Curtis Institute of Music.
Usoro nkuzi nke ndị nna ukwu na ntanetị n'efu na asambodo
Mmemme MIT Media Lab na Media Arts & Sciences
Curtis Institute of Music, Nna-ukwu nke Egwu
Mahadum nke ndị mmadụ MBA Mmemme na Njikwa
Mahadum nke ndị mmadụ Master of Education
Ndị a niile na-ahụ maka ihe mmụta dị n'ịntanetị n'efu na asambodo enwere ike nweta site na mpaghara ọ bụla nke ụwa ma ha niile bụ n'efu. Nwere ike ịchọta nkọwa na njikọ ngwa nke mmemme ndị a n'okpuru.
Ihe omume a bu ihe omuma nke ndi ntaneti n'efu na asambodo nke Massachusetts Institute of Technology (MIT) nyere, ihe omume a na-anabata ndi mmadu 50 na-acho kwa afo na-akwado ha ikike imeputa na imeputa ihe ohuru maka imeghari mmadu na mmelite nke ga enyere aka imeziwanye. ndụ.
Usoro ụlọ ọrụ Media Lab na-emekọ nkwukọrịta, imewe, mmụta, mmekọrịta mmadụ na kọmputa na azụmaahịa ya na ụmụ akwụkwọ ndị tinyere akwụkwọ maka akwụkwọ anamachọihe a ka inyocha ya niile na ndị ọzọ.
Iji tinye akwụkwọ maka usoro ihe omume nnabata a na-akwụghị ụgwọ, ndị na-enyocha akwụkwọ ga-enwerịrị ihe ọmụma siri ike na sayensị sayensị, akparamaagwa, ije, neuroscience, injinịa injin na sayensị ihe. Achọghị akara GRE mana achọrọ TOEFL maka ndị na-asụ asụsụ bekee.
Ngwa niile gụnyere akwụkwọ ozi nkwanye atọ na transcript site na ụlọ ọrụ gara aga ga-edo onwe ha n'ịntanetị.
Urtlọ Ọrụ Music nke Curtis na-enye usoro mmụta nnabata n'ịntanetị n'efu na asambodo na egwu, ụlọ akwụkwọ ahụ na-anabata naanị ihe dịka 4% nke onye nyocha ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ mmemme ahọpụtara nke ukwuu.
Iji tinye akwụkwọ, ndị na-enyocha akara ugo mmụta chọrọ nke opekata mpe nke iri atọ na abụọ gụsịrị akwụkwọ wee nwee nzere bachelọ ma ọ bụ were ma ọ bụ nyocha ma ọ dịkarịa ala otu usoro na akwụkwọ, ihe nkiri, nka, akụkọ ihe mere eme, asụsụ nke oge a na ọmụmụ egwu.
Achọghị akara GRE ma ọ bụ GMAT ka ha tinye maka mmemme a mana ndị na-asụghị Bekee ga-ewere TOEFL na akara 79 na 80.
Nna-ukwu nke Nchịkwa Azụmaahịa na Nchịkwa bụ usoro ihe omume nke nnabata n'ịntanetị na asambodo nke Mahadum nke Ndị Mmadụ nyere, mmemme a na-ewe ọnwa iri na ise nke ọmụmụ oge niile iji mezue ma ọ bụ okwu isii nke ụmụ akwụkwọ na-arụsi ọrụ ike nwere ike ime iji dabara oge ha site na itinye akụkụ -muta akwukwo ma buru otu uzo kwa okwu.
Iji tinye akwụkwọ maka mmemme a, ndị na-enyerịrị akwụkwọ ga-eweta akara ugo mmụta bachelor ha, mara nke ọma na Bekee ma ndị na-asụghị Bekee ga-eweta ihe akaebe nke ntozu bekee, nwee opekempe ọrụ afọ abụọ yana otu ntụle nke nwere ike ịbịa site n'aka onye were gị ọrụ ma ọ bụ n'oge gara aga ndị nkuzi.
Achọghị akara GMAT iji gaa n'ihu na ngwa gị mana leta nkwanye dị mkpa. A ga-edozi akwụkwọ niile site na ntinye akwụkwọ ntinye akwụkwọ.
Mahadum nke ndị mmadụ na-enyekwa usoro mmụta mmụta n'ịntanetị ọzọ n'efu na Mmụta yana asambodo ezubere iji zụọ ụmụ akwụkwọ maka ọrụ dị ike na agụmakwụkwọ, nlekọta ụmụaka na ndu obodo.
Usoro ihe omume ahụ nwere ọkachamara abụọ nke bụ;
Umu akwukwo / Middle School Education
Mmụta nke abụọ
Studentsmụ akwụkwọ ga-ahọrọrịrị ọkachamara na otu n'ime mpaghara ndị dị n'elu.
Tupu itinye akwụkwọ maka mmemme a, jide n'aka na ị ga - achọ ihe ndị a;
Asambodo asambodo nke di elu
Nghọta bekee, ndị na-asụ bekee na-asụghị bekee kwesịrị iji TOEFL.
Enweghị GMAT ma ọ bụ GRE chọrọ
A ga-edozi akwụkwọ niile dị n'elu site na kọmputa site na ntinye akwụkwọ ntanetị, bido ngwa gị EBE A.
N'ebe ahụ, ị ​​nwere nkọwa zuru oke na usoro mmụta mmụta nnabata kacha mma n'ịntanetị na asambodo na nduzi dị mkpa nke ga-enyere aka itinye akwụkwọ maka mmemme ndị a nke ọma.
Mmemme niile nweere onwe ha ịmụ ihe ma ị ka ga-enweta ezigbo akwụkwọ nke ndị ụlọ ọrụ ọha na eze na ebe ọ bụla n'ụwa ga-amata ya.
Ndepụta nke Free Online International Universities
Ọganihu International Online Accelerated
Mmemme Bachelor Degree Online dị ọnụ ala
Agụmakwụkwọ n'efu na Mahadum Harvard
Ọmụmụ Mahadum Online nke Mahadum Stanford
na-amụ ihe n'ịntanetị
nnabata n'efuakwụkwọ nchịkwa n'efun'efu usoro nchịkwa nke nna ukwufree online masters degree courses na asambodofree online nna ukwu ogo na akwụkwọonline nna ukwu ogo
Previous Post:Nkụzi Nkà Mmụta Ahụike Ahụike 11 kacha mma na Canada Maka ụmụ akwụkwọ mba ofesi
Next Post:11zọ XNUMX iji nweta akara ugo mmụta digri na Free na Theology Online
Helder zacarias ekwu, sị: